तिथि मेरो पत्रु » यस "सही समय" नयाँ सम्बन्ध अनुसरण गर्ने हुँदा?
द्वारा Bridget Sirtonski
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 19 2021 |3मिनेट पढ्न
Breakups कठिन हो. जस्तोसुकै सम्बन्ध समाप्त हुन्छ जो वा किन यो समाप्त, यो एक साझेदारीको अन्त निम्न एक भावनात्मक समय हुन सक्छ. त्यसैले तपाईं एकल आफूलाई फेरि पाउन र सारा डेटिङ संसारमा पहिलो मा एक बिट भारी महसुस गर्न सक्छन्.
पटक फेरि र दुःखको कुरा डेटिङ सुरु गर्न सुरु गर्नुपर्छ जब तपाईं लाग्ला छन्, यो समस्या कुनै सजिलो समाधान छ. Everyone deals with breakups at their own pace so there is no specific timeline to follow in regard to pursuinganew relationship afterabreakup.
त्यसैले तपाईं एक नयाँ सम्बन्ध सुरु गर्न तयार छन्, एक्लै सुरु डेटिङ गरौं? यहाँ तपाईँले सही बाटो मा हो भने थाहा मदत गर्न केही सुझाव हो:
आफैलाई समय दिनुहोस्
म झूठ-Breakups चूसना छु. You might want to curl up into the fetal position on your couch withapint of ice cream and Netflix for the company forawhile. एक सम्बन्ध अन्त सन्ताप गर्ने समय निकाल्दा सामान्य छ. यो पीडा जस्तै भारी भावनाहरू गर्न आउँदा, यो आफ्नो घाउ निको पार्न केही समय लाग्न सक्छ. एक स्वस्थ र परिपक्व तरिकामा टुक्रिन सामना सम्झौता र आफ्नो जीवन संग अगाडी बढन सबै भन्दा राम्रो तरिका हो.
आफैलाई मा काम
सम्बन्ध अन्त अक्सर जब तपाईं सबै कुरा सोधपुछ बाँकी छन्. के गल्ती भयो? यो मेरो दोष थियो? के म अलग गरेको छ सक्छ? आफ्नो असफल सम्बन्ध लागि आफैलाई सजाय रोक र दोष खेल खेल रोक्न, यो जा होइन तपाईं कुनै पनि राम्रो महसुस गर्न. सम्बन्ध बाहिर काम गरेन भनेर स्वीकार्नु र पछुतो को भावना मा सुस्त छैन तपाईं मा कदम मदत गर्नेछ. गल्ती देखि पाएपछि तपाईं छैन के तपाईं सम्बन्ध बाहिर चाहनुहुन्छ र के थाहा सबै भन्दा राम्रो तरिका हो.
आफैलाई सुधार र नयाँ कुराहरू प्रयास गर्ने प्रयास यस समय लिनुहोस्. आजसम्म थियो एक शौक तपाईं मा रुचि थिए तर प्रयास कहिल्यै? Now isaperfect time! एक भाषा पाठ्यक्रम लिनुहोस्, volunteer atacharity event, or even runamarathon. विकल्प अनन्त छन्. Try something new that makes you happy and just focus on yourself.
आफ्नो पूर्व संग सबै रोमान्टिक छोडे
केही मानिसहरू एक टुक्रिन पछि मित्रहरुलाई रहन सक्षम छन्, तर तपाईं बस उनलाई प्राप्त र कुराहरू बाहिर काम गर्न प्रयास पालन गर्न सक्दैनौं भन्ने छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई संग सबै सम्पर्क कटौती गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ, पनि यो त अस्थायी हो भने. यो तपाईं आफैलाई सम्बन्ध पुनः एक मौका अझै पनि छ कि झूटो आशा दिएर राख्न जब मा सार्न गाह्रो छ. समय मित्र बन्न सडक तल पछि छ, तर टुक्रिन अझै पनि आफ्नो मनमा ताजा छ जब, यो सिर्फ आफ्नो दूरी राख्न सजिलो हुन सक्छ.
खूंखार पलटाव जोगिने
यस पलटाव सम्बन्ध प्रतिमान तुरुन्तै भङ्ग गर्नुपर्ने आवश्यकता बानी छ. तपाईं यस सम्बन्ध एक विशिष्ट पलटाव हुनेछैन आफैलाई बताउन सक्छ, तर यो जसरी यसरी बाहिर बारी सक्छ, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो प्रयासको बावजूद. तपाईं अझै पनि आफ्नो अन्तिम सम्बन्ध राख्छ गर्न सकिन्छ र सबै भारी भावनाहरू मुछिएका, त्यसैले यो नयाँ सम्बन्ध मा ती पुराना भावना बिताएर भ्रामक हुन सक्छ.
यो flings पलटाव गर्न आउँदा (I.E. अनियमित सहयोगिहरु संग सेक्स भएको, लाभ मित्र, आदि), तिनीहरू केवल बचा गर्नुपर्छ. एक द्रुत hookup एक राम्रो विचार जस्तै लाग्न सक्छ, तर तिनीहरूले मात्र होइन छन्. एक टुक्रिन पछि कम एक्लो महसुस को एक माध्यमको रूपमा आकस्मिक सेक्स प्रयोग विपरीत प्रभाव अप्ठ्यारो; सबै भने र गरिन्छ पछि तपाईं संभावना भन्दा पनि अधिक सम्म झन् खराब महसुस हुनेछ. आफैलाई अतिरिक्त पीडा बचत र उलट आना सम्बन्ध / flings मा पारित.
तपाईं साँच्चै अगाडी बढन तयार महसुस
तपाईं अब आफ्नो पूर्व तिर प्रेम र हानि को भावना सुस्त हुँदा, आफ्नो Facebook पृष्ठ जाँच obsessively छोडिदिएका छन् (तपाईं छैन बहाना छैन), र रोकियो आफैलाई मेलमिलापको लागि आशा दिएर तपाईं अगाडी बढन तयार हुन सक्छ.
तपाईं त्यो निर्णय तपाईं सम्म अन्ततः छ किनभने फेरि डेटिङ सुरु गर्नुपर्छ तपाईंलाई बताउन गर्ने तपाईं वरिपरि कुरा सुन्छन् नगर्नुहोस्. तिमी अन्त पूरा गर्न तयार भएको महसुस गर्दा तपाईं डेटिङ सुरु गर्नुपर्छ जब नयाँ कुनै छ. This is your life, पछि सबै, so don’t try to appease your friends and family by hopping back into the dating game when you are just not ready yet.
7 न्यूयोर्क शहर सबैलाई मा जान्छ तिथिहरु
बेरोजगार गर्दा तिथि लागि कसरी
7 तपाईंको मन उडा ल्याउने सेक्स तथ्य
उहाँले तपाईं खतरा मोल्ने छ? यी लक्षण लागि बाहिर देखो!